Kedu ka foto profaịlụ LinkedIn dịruru mkpa? | Martech Zone
Ọtụtụ afọ gara aga, agara m ogbako mba ụwa na ha nwere ọdụ ụgbọ ala akpaghị aka ebe ị nwere ike ịse foto ma nweta isi okwu ole na ole. Nsonaazụ ya mara mma… ọgụgụ isi dị n'azụ igwefoto mere ka etinye isi gị na ebumnuche, wee gbanwee ọkụ ahụ na-akpaghị aka, wee nwee ọganihu… na-ese foto. Ọ dị m ka a dang supermodel ha pụtara nke ọma… na m ozugbo bulite ha na profaịlụ ọ bụla.
Ma ọ bụghị n'ezie m. Abụghị m onye supermodel. A bụ m nwoke na-achị ọchị, onye na-adịghị mma na onye nwere obi ụtọ na-enwe mmasị ịmụmụ ọnụ ọchị, ịchị ọchị, na ịmụta ihe n'aka ndị ọzọ. Ọnwa ole na ole gara aga, mụ na nwa m nwanyị na-eri nri abalị na otu nwanyị m maara na-anọdụ ala ka anyị na ha kparịta ụka. Nwa m nwanyị… onye na-apụghị ikwe ka ọnọdụ ọ bụla gaa unphotographed… snapped a foto anyị n'etiti-chuckle.
Ahụrụ m foto a n'anya. Achọrọ m ịkpụ ntutu, ndabere bụ osisi na-ekpo ọkụ, ọkụ na-anabata, na m na-eyi uwe elu burgundy dị larịị. enweghị uwe ma ọ bụ tie. Foto a is m. Ozugbo m rutere n'ụlọ, m gbutuo ya ma tinye ya na nke m LinkedIn profaịlụ.
Lelee ma jikọọ na Douglas na LinkedIn
N'ezie, abụghị m naanị onye ọrụ na LinkedIn. Abụ m onye ọkà okwu, onye ode akwụkwọ, onye ndụmọdụ, na onye nwe azụmahịa. Ọ bụghị otu izu na-aga na anaghị m ejikọta na onye nwere ike ịbụ onye mmekọ, onye ahịa, ma ọ bụ onye ọrụ na LinkedIn. Enweghị m ike ikwusi ike na foto profaịlụ gị dị mkpa. Tupu anyị ezute, achọrọ m ịhụ gị, hụ ọnụ ọchị gị, ma lee anya n'anya gị. Achọrọ m ka ọ dị m ka a ga-asị na ị bụ enyi na enyi, ọkachamara, ma bụrụkwa ezigbo mmadụ ijikọ.
Enwere m ike nweta nke ahụ site na foto? Ọ bụghị ya niile… mana enwere m ike nweta mmetụta mbụ!
Foto LinkedIn ọ na-emetụta ọrụ gị?
Adam Grucela na Passport-Photo.online jiri ụfọdụ ndụmọdụ pụtara ìhè zaa ajụjụ a bụ isi site na iji ọnụ ọgụgụ na-akwado na infographic a. Ozi ahụ na-emetụ akụkụ ụfọdụ dị oke egwu nke foto profaịlụ LinkedIn… gụnyere njirimara ndị kachasị elu:
Charisma - mee ka onye ọbịa ahụ nwee mmasị na ntụkwasị obi gị.
Ọkachamara – Gbanwee foto na niche gị.
Quality - bulite naanị foto ndị emere nke ọma.
Personality – mee ka ha mara gị nke ọma.
Ha na-enye ụfọdụ ndụmọdụ - dị ka iwere onye na-ese foto ọkachamara n'ọrụ, iji onyonyo dị elu, hụ na ọ bụ ọkachamara, jiri ọnọdụ kwụ ọtọ wee gosi charisma gị. ha na-enyekwa ụfọdụ ọkọlọtọ uhie:
Ejila ihu nke a na-ahụ anya.
Ejila foto dị obere.
Ejila foto ezumike.
Ejila onyonyo na-abụghị eziokwu.
Ejila foto ụlọ ọrụ karịa nkeonwe.
Adịla n'elu-elu na ịbụ nkịtị.
Ejila foto na-enweghị ọnụ ọchị!
The infographic nakwa ka ị mara na foto gị abụghị ihe niile… optimizing gị dum LinkedIn profaịlụ dị oké egwu na-amụba gị ike jikọọ na-goro. Jide n'aka na ị gụọ akụkọ anyị ndị ọzọ yana infographics na-esote, gụnyere nke a ntuziaka zuru ezu maka ịkwalite profaịlụ LinkedIn gị, yana mgbakwunye ndị a Ndụmọdụ profaịlụ LinkedIn.
Mana m na-achọ ịse foto asị
Enwetara m ya mana foto profaịlụ gị bụ ọ bụghị maka gị! Ọ bụrụ na-amasị gị ịnweta na iji foto nke onwe gị, jụọ ezigbo enyi ị tụkwasịrị obi. Ọ dịghị ihe dị ka ịnweta onye na-ese foto na enyi ka ọ kpọpụ gị, were gbaa iri na abụọ, wee hapụ enyi gị tụkwasịrị obi ka ọ họrọ foto ọ ga-eji. Ha maara gị! Ha ga-ama nke na-arụ nnukwu ọrụ na-anọchi anya gị.
Tags: douglas karrinfographicLinkedInLinkedin headshotnjikọ fotofoto jikọtaraprofaịlụ njikọfotofoto profaịlụAtụmatụ foto profaịlụ